ओलीको डर विपक्षीसंग भन्दा आफ्नै पार्टीका नेतासंग : के माधव समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छन ? दिए के हुन्छ नदिए के हुन्छ ? यस्तो छ अंकगणित - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
ओलीको डर विपक्षीसंग भन्दा आफ्नै पार्टीका नेतासंग : के माधव समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छन ? दिए के हुन्छ नदिए के हुन्छ ? यस्तो छ अंकगणित
ओलीको अग्नि परिक्षा
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार ०९:३९:००
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी नेताको भन्दा पनि आफ्नै पार्टी नेतासंग सवैभन्दा बढी डर रहेको छ । ओलीलाई माधव समूहले विश्वासको मत दिन्छन कि विपक्षीमा मतदान गर्नछ भन्नेमा ठूलो आशंका छ ।
सोही आशंका भएरनै सांसद पदनै खारेज गर्न खोजेका थिए । तर अदालतले खारेज गर्ने बाटो नखोलेपछि ओली अलमलमा छन् । विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरू मात्रै नभएर स्वयम् नेकपा एमालेकै नेताहरू पनि अन्योलमा छन् ।२७ वैशाखमा विश्वासको मत लिनेगरी अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको छ ।
ओली इतरका एमाले नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन त नियमित अधिवेशनमा पनि सक्नुहुन्थ्यो । तर बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइरहेका बेला विशेष अधिवेशन बोलाइयो । यसले पक्कै आशंका त उत्पन्न गरेको बताउँदै आएका छन् ।
विश्वासको मतमार्फत् संसदलाई कार्यकारी निकाय चयनको अधिकार सुम्पिएको भन्दा पनि अरू नै कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हुनसक्ने आशंका विपक्षी नेताहरूमा देखिन्छ ।
यस्तो आशंकाको कारण भने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा लिएका निर्णयहरू नै हुन् । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गर्ने अनि फेरि सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित संसद्लाई पनि निकम्मा बनाउनमा ओलीको भूमिका लुकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने भन्नेमा जसपासँगै माधव नेपाल समूह पनि निर्णायक देखिन्छ । तर यो समूहले ओलीसँग राखेको सर्त र ओलीको अडानले भने वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
अझ झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओली अढाइ वर्षभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले पनि उनीप्रति नेताहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि हाल कायम राजनीतिक दावी र संसदीय गणित हेर्दा २७ वैशाखपछि वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्ने वा नयाँ सरकार बन्न सक्ने दुवै संभावना पर्याप्त छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको थियो भने २७ वैशाखमा विश्वासको मत होइन, दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचन हुन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । अहिले पनि ओलीले चाहे जस्तै राजनीतिक कोर्स सम्भव भयो र उनले गरेका दावी सत्यमा रुपान्तरित भएमा वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ ।
त्यसका लागि एमाले एकताबद्ध हुन जरुरी छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित हुनुपर्छ । संसदमा ६१ सांसद भएको नेपाली काँग्रेस र ४९ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चमत्कार नभएसम्म ओलीले मत पाउने अवस्था छैन ।
ओली निकट नेताहरुले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को एउटा हिस्सा (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोे) ले पार्टी विभाजन गरेर भएपनि विश्वासको मत दिने दावी गर्दै आएका छन् । एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदलाई माओवादीले निष्कासन गरेकाले संसदमा बहुमत पु¥याउन १३६ सिट आवश्यक छ ।
नेकपा एमालेको १२१ मा जसपाबाट १५ मत ओलीलाई थपिनुपर्छ । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० यो सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । यी दुई दलसँग एक÷एक सांसद् छन् । त्यसो हुँदा जसपाको १३ मत भए पनि सरकारले निरन्तरता पाउँछ । तर, यसका लागि फेरि पनि माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि जसपा एक भएर वा विभाजित अवस्थामा पनि ओलीलाई समर्थन गरेन भने नेपाल समूहका सांसदहरुले मत दिएन पनि ओली सरकार ढल्छ । यसपछि भने ओलीले चाहेजस्तै मुलुक मध्यावधि निर्वाचन जान संसद्ले अर्को सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । तर, अहिलेकै राजनीतिक समीकरण र संसदको संख्या हेर्दा भने अर्को सरकार बन्न सक्ने एकभन्दा बढी विकल्प छन् ।
२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले बनेका माधव नेपाल समूहबाट ‘फ्लोर क्रस’ गराउनु भन्दा जसपालाई मनाउनेतिर काँग्रेस र माओवादीले धेरै समय खर्च गरिरहेको थियो ।
तर ओलीले नै एक कदम अगाडि बढेर विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि अब अविश्वासको प्रस्तावको ढोका पनि जबर्जस्त खुलेको छ । २५ प्रतिशतले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्ने संख्या हेरेर माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएमा वा फ्लोर क्रस गरेमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।
ओलीले नेता नेपालसहित ३० सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेको र चार जनालाई कारबाही गरेकाले त्यो संभावना पनि छ । यदि, माधव नेपाल समूहबाट त्यस्तो कदम चालेमा जसपा अहिले जस्तो निर्णायक नरहन सक्छन् ।
अहिले जसपाका एउटा हिस्सा (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई) नयाँ सरकार निर्माणको पक्षमा छन् र उनीहरुले आफूसँग १८ सांसद रहेको दावी गरिरहेका छन् । तर, त्यसरी वैकल्पिक सरकार बन्ने परिस्थिति बन्दै गएमा ओलीले नेपाल समूहका सांसदहरुलाई पदमुक्त गरिदिन सक्छन् ।
तर, नेपाल समूहलाई पदमुक्त गर्दाको फाइदा पनि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माणमा सहज हुन्छ । जस्तो– स्पष्टिकरण सोधिएका ३० सांसदलाई पदमुक्त गरिएमा १२१ सांसद भए काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्छ ।
यी दुई पार्टीसँग १०९ सांसद रहेको र दुई स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा र दुर्गा पौडेल) सांसदको साथ पाउँदा १० जना अपुग हुन्छ । अर्थात्, जसपाबाट त्यति संख्याका सांसदले समर्थन गरे बहुमत पुग्छ । किनभने, लुम्बिनी प्रदेशसभाबाटै आवश्यक पर्दा जसपा विभाजित हुनसक्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।
के होला आजको सेयर बजार,फेरि आउला लघुबित्त र हाइड्रोमा उछाल?
वायु प्रदूषणले बालबालिकामा उच्च रक्तचाप र मुटुको रोग बढाउछ...
सुनुवाईको विकल्प खोज्न सर्वाेच्चमा समिति
देउवासामु यक्ष प्रश्नः सत्ता रोज्ने कि पार्टीको भविष्य हेर्न...
सिन्धुपाल्चोकमा आजदेखि निषेधाज्ञा
ओलीले पाउलान् त माधव नेपाल पक्षबाट विश्वासको मत?
के होला आजको सेयर बजार,फेरि आउला लघुबित्त र हाइड्र...
वायु प्रदूषणले बालबालिकामा उच्च रक्तचाप र मुटुको र...
देउवासामु यक्ष प्रश्नः सत्ता रोज्ने कि पार्टीको भव...
महन्त ठाकुर समूहका २२ सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्ने, ठाकुर समू...
दुई दिन नेपालसंग होटलमा वार्ता, तेस्रो दिन नेपाल समूहलाई हटा...
मोतिलाल दुगडले बुक गरेको मेरियट होटलको कोठामा ओली–नेपालको पा...
देउवाको पक्षमा यसरी बन्दै छ माहोल, अब अघि सर्लान् त ?
मेरियट भेटपछि माधव नेपाल किन चुपचाप छन् ?
नयाँ सरकारलाई लिएर माओवादी र कांग्रेस उत्साहित, के अव ओली सर...